मोजा र अन्डरवेयरको शौखिन विरालो पक्राउ
२०७२ चैत १० बुधबार, रातको समयमा पुरुषको अन्डरवेयर र मोजा चोरी गर्ने विरालो पक्राउ परेको छ । न्यूजिल्याण्डमा रहेको ब्रिगिट ६ वर्षको विरालोको हो । ब्रिगिटले २ महिनामा हेमिल्टन शहरमा ११ जोर अन्डरवेयर र ५० भन्दा बढी मोजा जम्मा गरेको थियो । यो विरालोको मालिक सारा नाथनले यो विरालोको आश्चर्यजनक व्यवहारबारे फेसबुकमा पोष्ट गरेकि थिइन् । उनका अनुसार सफा गर्ने क्रममा पुरानो अन्डरवेयर देखेपछि विरालोको हर्कतबारे जानकारी भएको थियो । ... बाँकी अंश»
जब अचाक्ली निद्रा लाग्छ !
२०७२ चैत ८ सोमबार, एजेन्सी। स्वस्थ रहनका लागि हरेक रात ६ घन्टादेखि ८ घन्टासम्म सुत्नु आवश्यक छ। योभन्दा कम वा बढी समय सुत्नु रोगको लक्षण हो। रातमा मज्जाले निद्रा पर्यो भने अर्को दिन ताजा महसुस हुन्छ। तर निद्रा नपर्दाको अर्को दिन जिउमा थकान महसुस हुन्छ र जाँगर पनि चल्दैन। मानिसलाई जब अध्याधिक थकान हुन्छ अनि निद्रा लाग्छ। जव निद्राले अचाक्ली सताउछ तव मानिस रात या दिन भन्दैन, न त कुनै राम्रो विछौनो को जरुर नै हुन्छ। जहाँ पाए त्यहिँ निद्रा पुर्‍याउन कोशिस गर्छ। तपाईलाई आ ... बाँकी अंश»
दिनमा दुई सय पटक यौन सम्पर्क गर्ने चाहना !
२०७२ चैत ७ आइतबार, एजेन्सी। बेलायतकी एक महिलालाई जति पटक यौन सम्पर्क गरेपनि नपुग्ने समाचार त्यहाँका पत्रपत्रिकाले प्रकाशित गरेका छन्। २४ सै घण्टा यौन सम्पर्कको बारेमा मात्र सोच्ने उनलाई यौनको प्यास नमेटिने रोग नै लागेको छ। सारा कारमेन नामकी ति महिलाले दिनमा कम्तीमा २०० पटक यौन सम्पर्क गर्न चाहन्छिन। यौन सम्पर्क गर्न नपाउँदा उनी बेचेन रहने गरेकी छन्। चिकित्सकका अनुसार रोगका कारण उनलाई यस्तो भएको हो। चिकित्सकका अनुसार ति महिलालाई परमानेन्ट एराउजल सिन्ड्रोम ... बाँकी अंश»
२०७२ चैत ५ शुक्रबार, एजेन्सी। उमेर ढल्किँदै जाँदा बिहे गर्ने एउटा पनि केटा नपाएपछि सहरभरिका केटीहरुले सामूहिक रुपमा केटा पाउँ भन्दै हारगुहार गर्न थालेका छन्। यो ब्राजिलको घटना हो । ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियो गाँउ एकजना पनि अविवाहित पुरुष छैनन्। तर ६ सय जना अविवाहित महिला छन्। ती मध्ये अधिकांस ३५ वर्ष मुनिका तरुनी हुन। महिलाले नै भरिएको त्यो सहरमा महिलाकै बोलवाला छ। तर भएर के गर्नु ? पुरुष नपाएर अविवाहित महिला तनावमा पेरेका छन्। उनीहरुले हालै अविवाहित केटाह ... बाँकी अंश»
सेक्स गर्न नमान्दा प्रेमिकाले प्रेमीको लिङ्ग काटिन्
२०७२ चैत ४ बिहिबार, एजेन्सी। सेक्सको ‘भोक’ बढेपछि मानिस के सम्म गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने कुरा अमेरिकाको फ्लोरिडामा भएको एउटा घटनाले छर्लङ्ग पारेको छ । स्थानीय एक युवतीले यौन सम्बन्ध गर्न नमानेको झोंकमा आफ्नै प्रेमीको लिङ्ग छेदन गरिदिएकी छिन् । १९ वर्षीया क्रिस्टल ह्यारिसनले आफूसँग सेक्स गर्न अस्वीकार गरेको झोंकमा लिंग नै छेदन गरिदिएको आरोप उनका प्रेमीले लगाएको एक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले आफ्नो अनलाईन संस्करणमा जनाएको छ । त्यतिमात्रै होइन, सेक्स ... बाँकी अंश»
संसारका १० सुन्दर पुलहरु
२०७२ चैत ३ बुधबार, एजेन्सी। हाम्रो देश नेपाल अथा प्राकृतिक श्रोतको धनी देश मानिन्छ। बर्ष नै हजारौ पर्यटक नेपालमा त्यहि प्राकृतिक भौगोलीकताको मनमोहक दृश्य हेर्न आउने गर्दछन। तर सहि व्यवस्थापन नभएर पर्यटक गन्तव्यहरु धराशय हुदै गएको गुनासो वेलावेला सुनिदै आएका छन्। सवै देशले भने यस्ता ईश्वरी बर्दान पाएका छैन। त्यसैले मानविय आविष्कारले नै संसारका मानिसहरुलाई आफु ति तान्ने प्रयासमा धेरै राष्ट्रहरु लागिपरेका छन्। सफा-सुघर, व्यवस्थित पुर्वधार उनिहरुको विशेष ध् ... बाँकी अंश»
युवतीमा लीप्त कुलदिप जुक्जालीले धोका खाएपछि.....
२०७२ चैत २ मंगलबार, म्याग्दी । तपाई हामिलाई पुरुषले महिलाहरुलाई लुटपाट गरेको त थाहा छ तर म्याग्दीमा एक अपरिचत महिलाले पुरुषलाई लुटपाट गरेकी छिन् ।तपाईलाई कोही अपरिचीत व्यक्तिले खाजा खाने, घुम्न जाने अफर गरेको छ भने सचेत हुनुहोस । किनकी म्याग्दीको बेनीमा अपरिचीत युवतीको अफरमा खाजा खान होटलमा गएका एक व्यवसायी लुटिएका छन् । खाजा खान बोलाएकी युवतीले नसालु पदार्थ खुवाएर बेनीको हाडेभिरमा ब्यवसाय गर्दै आएका कुलदिप जुक्जालीको साथमा रहेको सुन, मोवाईल र पैसा लुट ... बाँकी अंश»
बेलायतीलाई सेक्स भन्दा अगाँलो प्यारो
२०७२ चैत २ मंगलबार, एजेन्सी। बेलायतमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार त्यहाँका मानिसहरु यौन सम्पर्क भन्दा वढी आलिंगन गर्न मन पराउने देखिएको छ। अध्ययनका अनुसार बेलायतका नागरिक दिनमा १३ पटक सम्म अगाँलोमा वेरिन मन पराउँछन्। अध्ययनका लागि गरिएको एक सर्वे अनुसार बेलायतका नागरिक आलिंगन गर्न साँढे नौ सेकेण्ड सम्म लगाउने गर्छन्। एक अर्का विच चुम्वनका लागि भने उनीहरुले महिनामा करिव एक घण्टा खर्चिने गरेका छन्। यति हुँदा हुँदै पनि बेलायतमा आलिंगन ज्यादा मन पराइएको छ। अध ... बाँकी अंश»
२०७२ फाल्गुण २९ शनिबार, काठमाडौ। गत वर्ष साउनमा प्रहरीको मुठभेडमा मारिएका दिनेश अधिकारी 'चरि'को गलफ्रेन्डका रुपमा खुवै चर्चामा आएकी खुश्बु ‍‍‌ओलीको विवाह भएको छ। उनको सन्तोष कार्कीसँग बैबाहिक सम्बन्ध गाँसिएको हो। शनिवार साँझ याक एण्ड यति होटलमा भव्य पार्टीसहित बरबधुलाई आर्शिवाद दिन परिवारजन तथा इष्टमित्रको ठूलो भिड लागेको छ। बिश्वकै महंगो बिश्वबिद्यालयमा पढेर नेपालमा आएकी मोडलिङ पृष्ठभुमिकी खुश्बु त्यसयता अर्पण र चरीसँगको प्रेम सम्बन्धका कारण पन ... बाँकी अंश»
विरालोसँग यौनक्रिडा गरेको देख्नेलाई ज्यान मार्ने प्रयास
२०७२ फाल्गुण २९ शनिबार, एजेन्सी। अमेरिकाको ओक्लाहामा राज्यमा एक २३ बर्षे युवतीले आफ्नो बिरालोसँग यौनक्रिडा गर्ने गरेको खुलासा भएको छ। सो घटनाको सुँइको पाएकी ७२ वर्षे वृद्ध माथी युवतीले ज्यान मार्न झम्टिए पछि सो घटना सार्वजनिक भएको हो। अंग्रजी पत्रिका डेली मेलका अनुसार, क्रिस्टिना ब्राउन नाम गरेको २३ वर्षे ती युवती अमेरिकाको ओक्लाहोमा शहरमा परिवार सँग बस्दै आएकी थिइन्। युवतीको आक्रमणमा परेकी उक्त वृद्धा ७२ बर्षे एल्मर मारिशन युवती की छिमेक हुन्। क्रिस्टिना ... बाँकी अंश»
सेक्स गदागर्दै लिंगमा चम्चा अड्किएपछि..... !
२०७२ फाल्गुण २८ शुक्रबार, एजेन्सीको । सेक्सका क्रममा बढी रोमान्स प्राप्त गर्ने हेतुले कतिपय अवस्थामा मानिसहरु अनेकन हरकत अपनाउन पछि पर्दैनन् । तर, कहिले–काँही मानिसका त्यस्ता हरकत उनीहरुका लागि खतरनाक समेत बन्न पुग्छ भन्ने कुराको ताजा उदाहरण अष्ट्रेलियामा घटेको एक घटना बन्न पुगेको छ । अष्ट्रेलियाका एक ७० वर्षीय बृद्धले सेक्समा रोमान्सका लागि आफ्नो लिंगमा एक स्टीलको घरायसी काँटा (चम्चा) घुसाए । तर, रोमान्स परको कुरो, त्यही काँटा उनको लागि घातक सावित भयो । समाचारक ... बाँकी अंश»
सेक्समा ग्रीस अगाडि
२०७२ फाल्गुण २७ बिहिबार, एजेन्सी। युरोपेली मुलुक ग्रीसले विश्वकै कामोत्तेजक मुलुकको ‘उपमा’ पाएको छ । एक अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिएको सर्वेक्षणमा ग्रीसले विश्वकै १० शीर्ष कामोत्तेजक मुलुकको सुचीमा शीर्ष स्थान प्राप्त गरेको हो । ग्रीसका आम सर्वसाधारणमा सेक्स अहिले पनि जीवनको प्राथमिक सुचीमा पर्ने गरेको पाइएको छ । ग्रीसका ८७ प्रतिशत मानिसहरुले आफूहरुले सातामा कम्तिमा एक पटक सेक्स गर्ने गरेको बताएका छन् । उनीहरुले आफूहरुले कामोत्तेजनालाई समेत प्राथमिकताको ... बाँकी अंश»
काँग्रेश महाधिवेशन: मतगणना स्थलको तस्विर (मतगणना शुुरु हुनु अघि)
२०७२ फाल्गुण २४ सोमबार, काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनमा मतदानो विवाद पछि शुरु हुने भनिएको मतगणना स्थलको तस्विरहरु हामीसँग उपल्बध् भएका छन्। उक्त तस्विरहरु मतगणना शुुर हुन केहि समय अगाडीको रहेको छ। ... बाँकी अंश»
२०७२ फाल्गुण २२ शनिबार, अमेरिका । अमेरिकाको इन्डियाना विश्वविद्यालयले यौन बानीव्यहोरासम्बन्धी गरेको अध्ययनअनुसार सत्र वर्षका युवतीमध्ये ३६ प्रतिशतले यौन सम्पर्क राखिसक्ने देखाएको छ । १४ देखि ९४ वर्ष उमेर समूहका ५ हजार ८ सय ६५ जनामाथि अनलाइनबाट गरिएको अध्ययनले सो तथ्य निकालेको हो । सिएनएनका अनुसार १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका युवतीहरु सोही उमेर समूहका युवकभन्दा यौन सम्पर्क राख्न बढी इच्छुक हुन्छन् । साथै १४ वर्षका युवतीमध्ये १० प्रतिशतले यौन सम्पर्क राखिसक्ने अध ... बाँकी अंश»
सामान्य वन्दैछ यौन भर्जिनिटी गुमाउनु !
२०७२ फाल्गुण २० बिहिबार, एजेन्सी । प्राय मनिसहरु आफ्नो भर्जिनिटीलाई लिएर धेरै सकरात्मक हुन्छन् । अमेरिकनहरु २०-३० बर्ष पहिलाको तुलनामा अहिले आफ्नो भर्जिनिटी गुमाएर ज्यादा राम्रो अनुभव गर्न थालेको अनुसन्धानले देखाएको छ । यो तथ्य एक रिसर्चमा पाइएको हो । डेली मेल पत्रिकामा प्रकाशित खबरका अनुसार इलेनाइस स्टेट यूनि‌भर्सिटी द्वारा अमेरिकामा २३ बर्षको अन्तरालमा ५०००० हजार मानिसहरुमा शोध गरिएको बताएको छ । मानिसहरुलाई शोधको क्रममा एक प्रश्नावली दिइयो जसमा उनको पहिलो प ... बाँकी अंश»
ब्रा भित्रै घुसाईदिनुस् टिप्स!
२०७२ फाल्गुण १९ बुधबार, एजेन्सी। पश्चिमेली मुलुकमा नाङगो दृष्य दिनु वा कम भन्दा कम कपडामा नृत्य गर्नु सामान्य जस्तै भईसकेको छ । तर पनि नृत्य गर्ने नर्तकीले फरक र मस्त तरिकाले दर्शकसँग नृत्यपछि पाइने टिप्स बटुल्छन् भने त्यो चाखको विषय पक्कै पनि बन्छ। त्यस्तै मस्त तरिका हालै ताईवानमा देखियो। ताईवानमा भएको एक फेस्टिवलमा नृत्य गर्ने २ नर्तकीको नृत्यले त मानिसहरुको ध्यान खिच्न सकेन तर उनीहरुको हरकतले भने थुप्रैलाई आकर्षण ग-यो । फेस्टिवलमा नृत्य गर्दै घुमेका ती २ ... बाँकी अंश»
अमेरिकामा पनि भुतघर !
२०७२ फाल्गुण १८ मंगलबार, एजेन्सी । संसारको 'मोस्ट हन्टेड प्लेसेज' मध्ये अमेरिकाको क्यालिफोनियामा अवस्थित एक घर सबैभन्दा डरलाग्दो घरको सुची रहेको छ । सेन दिएगो शहरमा रहेको उक्त घरमा बस्न गए जति सबैको मृत्यु भएको छ । यो घरको नाम 'वेले हाउस' हो । लाईफ म्यागजिनले आफ्नो एक संस्करणमा यो घरलाई संसारको सबे भन्दा भूताहा घरको सुचीमा समावेश गरेको थियो। यस घरमा मृत्युको सिलसिला सन् १८७५ देखी सन् १९६१ सम्म चलेको लाईफ म्यागजिनले जनाएको छ । श्री‍खंलाबद्ध घटना पछि यो घर ... बाँकी अंश»
सेक्स गर्दागर्दै स्तनले थिचेर मार्न खोजेको आरोपमा प्रेमिका पक्राउ
२०७२ फाल्गुण १८ मंगलबार, एजेन्सी। जर्मनीका एक व्यक्तिले आफ्नी प्रेमिका विरुद्ध अनौठो किसिमको आरोप लगाएका छन् । जर्मनीका ३० वर्षीय टिम स्किमडटले आफ्नी ३३ वर्षीया प्रेमिका फ्रान्जिस्का हानसेन विरुद्ध वक्षस्थलले थिचेर मार्न खोजेको आरोप लगाएपछि प्रहरीले फ्रान्जिस्कालाई पक्राउ गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अनलाईनहरुले जनाएका छन् । समाचारका अनुसार शारीरिक सम्बन्धका क्रममा प्रेमिकाले आफ्नो वक्षस्थलले थिचेर हत्या गर्ने प्रयास गरेको आरोप टिमले लगाएका हुन् । जर्म ... बाँकी अंश»
सबै भन्दा लामो लिङ्ग भएको पुरुष
२०७२ फाल्गुण १७ सोमबार, एजेन्सी । अमेरिकन कलाकार जोन फाल्कनको लिङ्ग १३.५ इन्च (३४.९ सिएम)लामो छ। एडल्ट फिल्म इडस्ट्रीले उनको यस क्षमतामा उनलाई इडस्ट्रीमा बोलाएका थियो, तर फाल्कनले प्रस्तावलाई स्विकार गरेन्न। एयरपोर्टमा एक पटक सिक्योरिटी अफिसरले फाल्कनको पेटमा लामो बस्तु रहेको शंका गरेका थिए र उनलाई पुन जाँच गरिएको थियो। सबै भन्दा छोटो लिङ्ग भएको पुरुषः हुनत सेक्समा लिङ्गको साइज त्यति महत्व नहोला तर त्यस्तो व्यक्ति जसको लिङ्गको लम्बाई ०.३९ इन्च (०.९ सिएम) मात्र छ उस ... बाँकी अंश»
जहाँ जनावरसँग सेक्स गरिन्छ !
२०७२ फाल्गुण १६ आइतबार, एजेन्सी। विश्वका विभिन्न स्थानमा सेक्स सम्बन्धी अनौठो परम्पराहरु रहेका छन् । त्यस्तै एक अनौठो परम्परा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । विश्वका धेरै देशमा जनावरसँग सेक्स गर्नु अपराधको श्रेणीमा पर्छ । तर, विश्वका केही यस्ता देश छन्, जहाँ जनावरहरुसँग सेक्स गर्ने परम्परा रहीआएको छ । केही समयअघि गधासँग सेक्स गर्ने अनौठो परम्पराको खबर बाहिर आएको थियो । उत्तरी कोलम्बियामा गधासँग सेक्स गर्ने अनौठो रीति रहेको छ । त्यहाँका पुरुषहरु गधालाई समाउँछन् ... बाँकी अंश»